Gmail paswọọdụ mgbake: niile nhọrọ | Nzukọ mkpanaaka
Edere Ferreno | 19/11/2021 16:00 | Internet
Gmail bụ ọrụ email a na-ejikarị n'ụwa niile. Ọtụtụ nde ndị ọrụ nwere akaụntụ n'elu ikpo okwu a, nke ha na-enweta ugboro ugboro. Ichefu paswọọdụ ịnweta bụ ihe ọtụtụ ndị na-amata n'ezie, ebe ọ bụ ihe na-eme site n'oge ruo n'oge. Nsogbu bụ na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ka esi enwetaghachi paswọọdụ Gmail.
Ọzọ anyị na-agwa gị nhọrọ dị iche iche anyị nwere ma ọ bụrụ na anyị chọrọ weghachite paswọọdụ anyị na Gmail. Ọ bụrụ na ị chefuola paswọọdụ gị iji nweta akaụntụ email gị n'elu ikpo okwu, a na-enye anyị ọtụtụ ụzọ iji nwetaghachi ya. Yabụ na ị gaghị ahapụ gị na-enweghị ike ị nwetaghachi ohere gị.
Gmail na-enye anyị usoro nhọrọ nke anyị nwere ike ịmalite mgbe anyị kwesịrị iweghachite paswọọdụ ahụ. N'ime nhọrọ ndị a, a na-enwe mgbe niile nke dabara n'ihe ịchọrọ n'oge ahụ ma ọ bụ nke ga-adịrị gị mma ịbanyeghachi akaụntụ gị na ọrụ email a. Gmail na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ, yabụ na ụfọdụ n'ime usoro ndị a ọ ga-ekwe omume ị nwetaghachi ohere ahụ na akaụntụ ahụ. Anyị na-agwa gị ihe niile anyị nwere ugbu a n'elu ikpo okwu.
1 Weghachite gị ikpeazụ Gmail paswọọdụ
2 Jiri mkpanaka Android gị
3 SMS ma ọ bụ kpọọ
4 Ozi ịntanetị ọzọ
5 Ajụjụ nchekwa
6 Nhọrọ ikpeazụ
Weghachite gị ikpeazụ Gmail paswọọdụ
O nwere ike ime na ị gbanweela paswọọdụ na akaụntụ Gmail gị n'oge na-adịbeghị anya nakwa na ị naghị echeta paswọọdụ ọhụrụ nke i mebere, mana ị na-echeta paswọọdụ tupu mgbanwe ahụ. Nke a bụ ihe nwere ike inye aka na nke a. Ihe mbụ a na-ajụ anyị mgbe anyị na-agbalị ịweghachi paswọọdụ Gmail bụ ọ bụrụ na anyị echeta paswọọdụ ikpeazụ anyị nke anyị ji mee ihe na akaụntụ ahụ. Ya mere ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, anyị nwere ike iji ya nweta ohere ọzọ.
Nke a bụ ụzọ iji nyekwuo Google ozi, dịka ụzọ isi gosi na ọ bụ anyị n'ezie. Ọ bụrụ na icheta okwuntughe gara aga ị jiri na akaụntụ gị, ị nwere ike tinye ya. Nke a bụ nzọụkwụ nke ga-eje ozi iji mata gị na Google na ị ga-enwe ike ịmalite usoro ịgbanwe paswọọdụ ọzọ wee si otú ahụ nweta akaụntụ gị na ọrụ email ọzọ.
Jiri mkpanaka Android gị
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ekwentị Android, ebe ha na-eji otu akaụntụ Gmail ahụ ha na-agbalị ịnweta ugbu a. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị ma ị chetaghị okwuntughe gị gara aga, ekwentị gị bụ usoro ọzọ ị nwere ike iji nwetaghachi koodu nnweta na ikpo okwu. Na nzọụkwụ nke abụọ mgbe ị na-agbalị naghachi paswọọdụ anyị na-ajụ ma anyị nwere ihe gam akporo ekwentị. Anyị pịa bọtịnụ Ee, nke mere na usoro ga-amalite na nke anyị ga-eji mobile.
Site na ịpị bọtịnụ ahụ, mgbe ahụ, a window ga-apụta na mobile. Na mpio ahụ, a jụrụ anyị ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-agbalị ịbanye na akaụntụ Gmail. Anyị na-akwado na ọ bụ anyị, na ihuenyo ọzọ anyị ga-enwe ike ịmepụta paswọọdụ ọhụrụ maka akaụntụ anyị. Ya mere, usoro a bụ ihe dị nnọọ ngwa ngwa na ọ na-enye ohere ka anyị naghachi Gmail paswọọdụ na a okwu nke oge. Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo ekwentị, ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma nhọrọ, ebe ọ bụ ihe karịsịa mfe.
SMS ma ọ bụ kpọọ
Ọ bụrụ na usoro gara aga enyebeghị aka, ọ bụrụ na ọmụmaatụ, ị nweghị ekwentị mkpanaaka Android ma ọ bụ na ịnweghị mkpanaka gị n'oge ahụ, Gmail na-enye anyị nhọrọ ndị ọzọ iji nwetaghachi paswọọdụ nnweta. Ọ ka nwere ike iji ekwentị anyị gosipụta njirimara anyị wee si otú ahụ nweta akaụntụ ahụ ọzọ. N'okwu a, a na-ahapụ anyị gosi ma ọ bụ nyochaa njirimara site na SMS ma ọ bụ kpọọ, nke mere na mgbe e mesịrị anyị nwere ike tinye akaụntụ ọzọ. Usoro ọdịnala, mana nke ka dị.
Na ihuenyo mgbe anyị na-agbalị naghachi Gmail paswọọdụ, a ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ịhọrọ SMS ma ọ bụ oku. Nsonaazụ na ikpe abụọ a bụ otu ihe: a ga-ezigara anyị koodu nke bụ nke anyị ga-abanye ma emechaa na ihuenyo PC. Ọ bụrụ na anyị ahọrọla oku ahụ, anyị ga-enweta ọkpụkpọ ekwentị ahụ, a ga-edepụta koodu ahụ ka anyị wee gaa n'ihu. Koodu a bụ ihe Google na-eji gosi na ọ bụ anyị n'ezie wee nwee ike ịmeghachi akaụntụ ahụ. Ozugbo itinyere koodu ha zitere gị, pịa ọzọ. A ga-ekwenye na koodu a bụ nke ziri ezi ma na ihuenyo ọzọ ị ga-enwe ike ịgbanwe paswọọdụ gị iji nweta Gmail.
Maka usoro a, ọ dị mkpa ịnwe ekwentị anyị na anyị, ebe ọ bụghị ya, anyị agaghị enwe ike ịnweta SMS ma ọ bụ oku ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị ekwentị gị, a ka nwere nhọrọ iji nwetaghachi akaụntụ ahụ oge niile.
Ozi ịntanetị ọzọ
Mgbe anyị mepụtara akaụntụ na Gmail, a na-ajụkarị anyị inye adreesị ozi ọzọ. Akaụntụ a bụ ihe nwere ike ịbara anyị ezigbo uru n'oge dị otú a, nke anyị na-agbalị ị nwetaghachi paswọọdụ Gmail. Enwere ndị ọrụ na-enweghị akara ekwentị edebanyere aha ma ọ bụ jikọtara ya na akaụntụ ha na ọrụ ozi, mana nwere akaụntụ email ọzọ jikọtara ya na ya. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike iji akaụntụ a na usoro a.
Nzọụkwụ a ga-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka nke gara aga. A ga-eziga koodu na akaụntụ email ọzọ, nke bụ nke anyị ga-abanye na Gmail, ka anyị wee nwetaghachi. Nke mbụ, a ga-agwa anyị ka anyị gosi ma ọ bụrụ na adreesị ozi-e ọzọ bụ nke anyị nwere ma ọ bụ nke anyị ga-ezite koodu ahụ wee chere ka ezigara anyị ya. Mgbe ahụ, anyị tinye ya na Gmail wee pịa ọzọ. Na ihuenyo ọzọ anyị nwere ike ịme mgbanwe nke paswọọdụ akaụntụ anyị.
Akaụntụ email ọzọ ọ nwere ike isi na ọrụ ozi ọ bụla ọzọ, dị ka Outlook, Yahoo ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụhaala na ị na-aga n'ihu na-enweta ya, ka ị nwee ike ịnweta koodu ahụ ha na-ezigara gị na Gmail, ọ gaghị enwe nsogbu na nke a.
Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a dị n'elu nwere ike ịrụ ọrụ ma ị ka na-enwebeghị ike weghachite paswọọdụ Gmail gị. N'ụzọ dị mma, a ka nwere ụzọ na nhọrọ dịnụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị na-erute ebe a, nke bụ eziokwu bụ na nke a bụ ihe na-agbagwoju anya. Nhọrọ nke ka dị taa bụ ajụjụ nchekwa. Ọtụtụ ndị ọrụ guzobere ajụjụ nchekwa ozugbo dị ka ụzọ isi gosipụta njirimara ha mgbe ha na-abanye na akaụntụ ahụ, a na-ejikwa nke ahụ n'oge ahụ mgbe anyị na-agbalị ị nwetaghachi paswọọdụ nnweta.
Akụkọ ọjọọ ahụ bụ na ajụjụ nchekwa a abụghị ihe na-arụ ọrụ n'onwe ya, mana Google ga-ajụ anyị nakwa ụbọchị anyị mepere akaụntụ ahụ nke mail na Gmail. Anyị nwere ike mara azịza nke ajụjụ nchekwa, ma ọ bụrụ na anyị enweghị ụbọchị ahụ (a na-arịọkwa afọ na ọnwa), mgbe ahụ, usoro a nwere ike ịbụ ihe na-abaghị uru. Ị nwere ike ịnwa ịza eziokwu a, ma ọ bụrụ na ị nwere echiche gbasara ụbọchị ị malitere iji akaụntụ gị n'elu ikpo okwu. Ọ dị mkpa ka anyị bịaruo nso ụbọchị a dịka o kwere mee na ajụjụ a.
N'ụzọ dị mwute, ọ nwere ike ịbụ ikpe na nhọrọ niile dị n'elu enwebeghị ike weghachite paswọọdụ Gmail gị. N'okwu a, ị ga-ahụ na ị ga-abanye na ibe ikpeazụ ma ọ bụ nhọrọ na ụdị mgbake na Gmail. N'ebe a, a na-enye anyị ohere itinye ọzọ email ị nwere ike ịlele, ma otu sitere na Gmail ma ọ bụ n'elu ikpo okwu ọzọ. Anyị ga-enyocha ya mgbe ịpịrị ọzọ, n'ihi na a ga-eziga koodu na adreesị ahụ, ka e wee mara na akaụntụ a dị n'aka anyị.
Google ga-akpọtụrụ gị site na adreesị ozi-e ahụ, ọ bụrụ na ha achọpụta na nke a bụ akaụntụ gị n'ezie. Ụlọ ọrụ ahụ ga-egosi usoro usoro ị ga-eso, ka i wee nwee ike nwetaghachi akaụntụ gị n'elu ikpo okwu. O nwekwara ike ime na ha enweghị data zuru oke iji chọpụta ma ọ bụ chọpụta ma ọ bụ nke gị wee gwa gị na ọ gaghị ekwe omume. N'ọnọdụ ahụ ọ na-eche na a hapụrụ anyị na-enweghị ohere ịnweta akaụntụ Gmail, anyị enwebeghị ike ị nwetaghachi paswọọdụ gị n'ụzọ ọ bụla, ọ dị mwute. Nsogbu bụ na n'ime usoro a, anyị enweghị ike ịkpọtụrụ onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ ahụ, n'ihi ya, ọ dịghị ụzọ isi kọwaa ọnọdụ a ma si otú a nyere anyị aka inwetaghachi ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Gmail paswọọdụ mgbake: niile nhọrọ
Otu esi enyocha koodu QR na mkpanaka gị ozugbo